राष्ट्रपति हरबर्ट हौवर: एक जीवनी
हर्बर्ट हूवर: संयुक्त राज्य अमेरिका को तीस-प्रथम राष्ट्रपति
हौवर को आइवाई को पश्चिम शाखा मा 10 अगस्त, 1874 को जन्म भएको थियो। उनले एक क्वेकर बसाए। 10 बर्षदेखि, उनी ओरेगनमा बसिरहेका थिए। ह्वावर हुनुहुन्थ्यो जब उनको बुबा मृत्यु भयो। तीन वर्षपछि तिनको आमा मरे, र तिन र तिनका दुई बहिनीहरू पठाइएका थिए विभिन्न विभिन्न रिश्तेदारसित। उहाँले युवाको रूपमा स्थानीय विद्यालयमा भाग लिनुभयो। उहाँले उच्च विद्यालयबाट स्नातक गरेन। त्यसपछि त्यसपछि क्यालिफोर्नियाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा पहिलो कक्षाको भागको रूपमा भर्ना गरियो।
उनी भूगोलमा डिग्री लिएर स्नातक गरे।
हौभर जेस क्लार्क हौवरको छोरा हुनुहुन्थ्यो, एक लोहा र विक्रेता, र हुलादा मिन्टोर्न, एक क्वेकर सेन्टर। उहाँसँग एकजना भाइ र एक बहिनी हुनुहुन्थ्यो। 10 फरवरी, 18 99 मा, हर्बर्ट हौवर ले लो हेनरीलाई विवाह गरे। उनी स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा भूविज्ञान अध्ययन गर्दै उनको सहभागी विद्यार्थी थिए। साथसाथै तिनीहरू दुई छोरा थिए: हर्बर्ट हौभर जूनियर र एलन हवर। हर्बर्ट जूनियर एक राजनीतिज्ञ र व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो जबकि एलन एक मानववादी हुनेछ जसले आफ्नो पिताको राष्ट्रपतिको पुस्तकालय स्थापना गर्यो।
प्रेसीडेंसी देखि पहिले हेरबर्ट होवर को क्यारियर
हाउभरले 1983-19 14 बाट खनन इन्जिनियरको रूपमा काम गरे। म प्रथम विश्वयुद्धको दौडान, उनले अमेरिकी राहत समितिको नेतृत्व गरे जुन युरोपमा अमेरिकन फराकिलो सहयोग पाए। त्यसपछि उहाँ बेल्जियमको राहत आयोग र अमेरिकी रिफिभरेसन प्रशासकको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो जुन यूरोपमा टनन र आपूर्ति पठाइएको थियो। उनले यूएस फूड प्रशासक (1917-18-18) को रूपमा सेवा गरे।
उनी अन्य युद्ध र शान्ति प्रयासमा संलग्न थिए। 1921 -289-28 मा उनले सचिव वाणिज्यका लागि वरेन जी। हार्डिंग र क्याल्भिन कूलिजको वाणिज्य सचिवको रूपमा सेवा गरे।
1928 मा, हूभरले चार्ल्स कर्टिससँग आफ्नो मतदानको रूपमा पहिलो मतमा राष्ट्रपतिको लागि रिपब्लिकन उम्मेद्वारको रूपमा नामाकरण गरे।
उनी अल्फ्रेड स्मिथ विरुद्ध राष्ट्रपति बनेका थिए, पहिलो रोमन क्याथोलिकलाई राष्ट्रपतिको लागि दौडने नाममा। उनको धर्म उनको विरुद्ध अभियान को एक महत्वपूर्ण भाग थियो। हवरले 58% मतदान गरे र494मतबाट 444 जित्यो।
हर्बर्ट हौवरको प्रेसीडेंसीको घटनाक्रम र समापन
1930 मा, विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट किसानहरू र अरूलाई सुरक्षा दिन मद्दतको लागि Smoot-Hawley Tariff लाई लागू गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश, अन्य राष्ट्रहरूले ट्राफिकलाई पनि लागू गरे जसको अर्थ संसारभरको व्यापारमा ढिलो भयो।
ब्ल्याक बिहीबार, अक्टोबर 24, 1929मा, स्टक मूल्यहरू भारी मात्रामा झरेझैँ सुरु भयो। त्यसपछि अक्टोबर29 1929मा, स्टक बजार पनि दुर्घटनाग्रस्त भयो। ठूलो मात्रामा अनुकरणको कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले पैसा खरिद गर्न पैसा लिने पैसाहरू हजारौं मानिसहरूले स्टक बजार दुर्घटनाको साथ सबैलाई हराए। तथापि, ठूलो अवसाद एक विश्वव्यापी कार्यक्रम थियो। डिप्रेसनको समयमा, बेरोजगारी 25% बढ्यो। यसबाहेक, सबै बैंकहरूको लगभग 25% असफल भयो। हूभरले चाँडै समस्याको मात्रा देख्न सकेन। उहाँले बेरोजगारीको सहयोगको लागि कार्यक्रमहरू लागू गर्नुभएन तर बरु, व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न केहि उपायहरू राख्नुहोस्।
मई 1932 मा लगभग 15,000 दिग्गजहरूले वाशिंगटनमा 1924 मा बप्तिस बीमा पैसाको तुरुन्त भुक्तानी माग्न आग्रह गरे।
यो बोनस मार्चको रूपमा चिनिन्थ्यो। जब कांग्रेसले आफ्ना मागहरूको जवाफ दिएनन्, धेरै म्यानरहरू शान्टिटोटाउनमा बसिरहेका थिए। हौवरले दिग्गज बाहिर जाने क्रममा जनरल डगलस मैक आर्थर पठाउनुभयो। तिनीहरूले आँसुको ग्याँस र टैंक प्रयोग गरे र उनीहरूको बास र श्याकहरूमा आगो लगाए।
ब्युनेइथ संशोधन हूभरको समयमा अफिसमा भएको थियो। यसलाई 'लम-डक संशोधन' भनिन्छ किनभने यो समय घट्यो जब नोभेम्बरको निर्वाचन पछि बाहिर जाने राष्ट्रपति हुनेछ। यो मार्च4देखि 20 जनवरीसम्म उद्घाटनको मिति सारियो।
हौभर 1932 मा पुन: चयनको लागि भाग्यो तर फ्रैंकलिन रोस्वेल्ट द्वारा पराजित भएको थियो। उनले कैलिफोर्नियामा पलो अल्टोलाई सेवानिवृत्त गरे। उनले नयाँ डीलको विरोध गरे। उनी विश्व संसारका लागि खाद्य आपूर्तिको समन्वयकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो (1946-47)।
उनी सरकार वा होवर आयोग (1947-49) र सरकारी अपरेसन (1953-55) को कार्यकारी शाखाको संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जसले सरकारलाई सुदृढ गर्ने उपाय खोजे। उहाँ क्यान्सरको अक्टोबर 20, 1964 मा मर्नुभयो।
हर्बर्ट हौभर राष्ट्रपति थिए अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा खराब आर्थिक आपत्तिजनक। उनी बेरोजगारहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न तयार थिए। यसबाहेक, बोनस मार्चर्स जस्ता समूहहरू विरुद्ध उनको कार्य अवसादले आफ्नो नामको पर्याय बनायो। उदाहरणका लागि, छातीहरू "ह्वावरभिल" भनिन्छ र ठन्डबाट मानिसहरूलाई समात्न प्रयोग गरिने समाचारहरू "हॉवर क्यान्सर" भनिन्छ।
3 डेमोक्रेट जो राष्ट्रपति हुनेछ सोमदेव
Watergate स्क्यान्डलमा भित्र स्कूप
संयुक्त राज्य को आयोपेड प्रेसिडेन्स
रटरफोर्ड बी हेस फास्ट तथ्य
केन्टकी र वर्जीनिया रिजोल्युशन
अब्राहाम लिंकन र टेलीग्राफ
जिमी कार्टर - संयुक्त राज्य अमेरिका को तीस-नौवें राष्ट्रपति
जन क्विन्नी एडम्स: संयुक्त राज्य अमेरिका को6औं राष्ट्रपति
लिन्डसन जॉनसन को बारे मा जान्न को लागि 10 चीजें
वरेन जी हार्डिंग फास्ट तथ्य
5 चीजहरू तपाईंले 'तपाईंको ड्रैगनलाई कसरी प्रशिक्षण दिनुहुन्छ' भन्ने बारे थाहा थिएन
डा। सीस 'बाट कसरी ग्रिनच चोरी क्रिसमस
लियो र वृश्चिक प्रेम संगतता
अमेरिकी इतिहासमा चुनाव रिलिज गर्दै
5 कम्युनिस्टहरूले कसलाई न्यूनतम वेतन खारेज गर्नेछन्
डप्लगर रडार कसरी कार्य गर्दछ?
7 नयाँ एम्स्टर्डम को बारे मा महत्वपूर्ण तथ्य
मारीह केरी - ममी को हो?
यूएस संघीय रिजर्व प्रणाली
साइन्समा एक चर के हो?
महत्त्वपूर्ण चित्र र वैज्ञानिक सूचना परीक्षण प्रश्नहरू
9 यस कम्पैक्ट वीआईवीए को उपयोग को लागि र ईईयूयू को तुलना मा छ
वाइकिंग आक्रमण: युद्धको माल्सन
आवश्यक क्यानो उपकरण
क्लाइन के हो?
कलेजमा रूममेट्ट अतिथिहरूको लागि5आधारभूत नियम
50-पटक पश्चात्ताप गर्ने सबै-समयको बास्केटबल लेखक
माई शर्ट हाउस - ग्लेन मुर्कोटको ग्रैंड उदाहरण
ESL पाठ - यात्रा योजनाहरु
बाइक ब्रेकहरू - तपाईंको पाङ्ग्राहरूको एक महत्वपूर्ण भाग
दुई प्रकारका साल्ट्रीटर क्याटफिश र उनीहरूलाई कसरी समात्न सकिन्छ
बहुमूल्य र बहुमुखी रत्न को वर्णित सूची
अमेरिकी गृहयुद्ध: ब्रिगेडियर जनरल जेम्स बर्नेस